Home Vaovao momba ny fialamboly Elvira dia mivoaka ao amin'ny Memoir Vaovao 'anao am-pitaka, Elvira'
Niresaka momba ny fifandraisany 19 taona i Cassandra Peterson
by Anthony Pernicka Septambra 21, 2021
by Anthony Pernicka Septambra 21, 2021 19,429 hevitra
“Mety hankahala ahy ve ireo mpankafy ahy satria tsy araka ny nantenain'izy ireo ahy?” Cassandra Peterson AKA Elvira, Tompovavin'ny maizina dia mizara ao amin'ny memoir vaovao. "Fantatro tokoa fa hisy ny sasany ho diso fanantenana ary mety ho tezitra mihitsy aza, saingy tsy maintsy miaina miaraka amiko aho, ary amin'izao fotoana izao amin'ny fiainako dia mila milaza ny marina momba ahy aho."
Peterson ny Ny anao feno herisetra, Elvira mivoaka izao ary mitondra antsika lalindalina kokoa amin'ny fiainana manokana an'ny Tompovavintsika maizina ankafizintsika. Peterson dia nanambady 25 taona (mpitantana mpihira) Mark Pierson ary ny fifandraisana amin'ny vehivavy dia zava-baovao ho azy.
Peterson sy ny sakaizany akaiky Teresa "T" Wierson dia teo amin'ny filma niaraka tamin'izy ireo rehefa toa nirongatra ny raharaha. Mizara amin'ny bokiny momba ny faniriany tampoka hanoroka an'i Wierson izy.
“Toa gaga ihany aho. Inona no nataoko? Tsy mbola liana tamin'ny vehivavy toy ny zavatra hafa ankoatry ny namana aho. Nahatsapa ho very hevitra aho. Tsy izaho io! Gaga aho fa efa namako efa an-taonany maro ary tsy nahatsikaritra ny simika nataontsika, ”hoy izy nanoratra. “Tsy ela dia hitako fa nifandray tamin'ny firaisana izahay tamin'ny fomba mbola tsy niainako.”
Io no fiandohan'ny fitiavany an'i Wierson.
Niaraka nandritra ny 19 taona izy roa fa tsy mora. Ireo vorona fitiavana dia nangina ny fifandraisan'izy ireo noho ny tahotra izay mety hataon'ny marika Elvira. Na izany aza, efa lasa lavitra izao tontolo izao ary tsapan'i Peterson ankehitriny fa ny fiainana ny tena tena izy no zavatra tsara indrindra azony atao.
Midera an'i Casandra Peterson izahay tamin'ny famelana ny tenany ho mora tohina ary mamela antsika rehetra hiditra amin'ny fiainany manokana. Ny isan'ny olona hahita tanjaka amin'ny teniny, heveriko fa ho goavana.
Azonao atao ny mividy ny boky vaovaon'i Peterson Ny anao feno herisetra, Elvira eto!